तोरी, सूर्यमुखी र ओलिभ तेलको के छ फाईदा र बेफाईदाहरु? - LiveMandu
लेखकः डा. ओम मुर्ति अनिल
यो तेल तोरीको बीउबाट उत्पादन गरिन्छ । यसमा ६० देखि ७० प्रतिशत मोनो अनसैचुरेटेड फ्याट हुन्छ । यसमा १५ देखि २०प्रतिशतपोली अनसैचुरेटेड फ्याट र १० देखि १५प्रतिशतsaturated Fat हुन्छ । तोरीको बीउमा प्रशस्त Omega3Fatty Acid, Iron, Zinc, Calcium आदि तत्वहरु पाइन्छन्, जुन स्वास्थ्यको लागि लाभकारी मानिन्छ । तोरीको तेलमा Omega6र Omega3को अनुपात सर्वोत्तम भएको तथ्य प्रमाणित छ । यो अनुपात राम्रो भएको खानेकुरा मुटुकोलागि अत्यन्तै स्वस्थकर मानिन्छ र यसले मुटुमा ब्लोकेज हुनबाट जोगाउछ । ओलिभ तेल भन्दा पनि तोरीको तेलमा Omega6र Omega3को अनुपात राम्रो भएको पाइन्छ । आयुर्वेदको अनुसार यो तेललाई शरीरको मसाज गर्न र Antibacterial को रुपमा प्रयोग गरिन्छ । यसले शरीर बलियो बनाउनुको साथै रत्तसञ्चारमा सुधार ल्याउछ भन्ने धारणा छ ।
Tags: ओलिभको तेल (Olive Oil)डा. ओम मुर्ति अनिलतोरीको तेल (Mustard Oil)मुटुरोग विशेषज्ञसूर्यमुखीको तेल (Sunflower Oil)
महानायक राजेश हमाल र उनकी श्रीमती मधु भट्टराईको पहिलो म्युजिक भिडियो सार्वजनिक